About Us - Shijiazhuang Pengtong IMP & Inani Co., Ltd.
Shijiazhuang PengTong IMP. & EXP. Co., Ltd. ---- kuyinto olunzulu UKUKHIQIZA angaphandle & ukuhweba ibhizinisi. Amanga inkampani e Shijiazhuang ka Hebei of yendwangu base kazwelonke, okungenye yezinkundla ezinkulu kunazo zonke yendwangu elisekela e China. Kukhona umshini 400 ukwelukwa kanye ukudaya okuqhubekayo & umshini ephrintiwe kanye nebandla elithokozayo. Asikwazi sifake amamitha angaphezu kwezigidi ezingu-100 ingrey izimpahla ukudaya izindwangu kwezigidi ezingu-200 minyaka yonke.
Sisabalalisa ahlukahlukene okukhiqiza Indwangu ukuhlangabezana nezidingo amakhasimende ethu ngaleso sikhathi. ukukhiqizwa eyinhloko imali ----- ukotini, T / C, T / R, kukhona ethafeni, twill, herringbone. Basuke okuthengiswa emakethe yasekhaya bese zithunyelwa emazweni angaphezu kuka amabili nezindawo sengathi US, HongKong, eNingizimu-mpumalanga Asia, Middle East nase-Europe.
Sihlala bathele entsha imibono base on quality enhle futhi has idumela elihle kakhulu kusuka ikhasimende.
Sizobe njalo ezisaqhubeka inqubomgomo "Kuhle Quality, Ngenhlonipho Credit, Service aqotho futhi zashaya Cooperation" ukunikeza inkonzo unqambothi wonke amakhasimende. Phakathi naleso sikhathi, sizoqhubeka ukuqinisa amakhono ethu ezimakethe zasekhaya nasemazweni angaphandle ngesisekelo ngcono imikhiqizo eyikhwalithi kanye service.
PengTong abheke phambili ekuthuthukiseni kanye kuwe esikhathini esizayo.
Thina umise ephelele ukuphathwa uhlelo kanye ukukhiqizwa ukugeleza, umnyango asathuthuka, umnyango umsizi, umnyango QC, umnyango wezezimali.
amakhasimende ethu avamile: H & M GAP Zara Eland kaLevi BASIC HOUSE TOMMY
Umkhakha futhi ukuhweba ukuhlanganiswa
Sine embonini yethu siqu, ukuze sikwazi ukunciphisa izindleko futhi nibuyisele inzuzo emuva amakhasimende, okwamanje, singahlinzeka Imisebenzi eprofetjhinali.
Uma kukhona izinkinga izinga ngemva saleing, sizobe zihlele umuntu ekhethekile usizo onqenqema inkinga ngokushesha ngangokunokwenzeka
Ukuvikelwa eqinile umkhiqizo
Sinazo zonke izinhlobo Shuttle kusondela 400 amasethi, ungakwazi akhiqize ezingu-14 amamitha lendwangu ngonyaka
Ngu izakhiwo Tianjin amatheku Qingdao port, singahlinzeka inkonzo "Indlela esheshayo ukulethwa isikhathi, isikhathi kwezidingo kuqala".
Tc 65/35 32*32 106*58 Plain Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Chambray Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Woven Fabric, TC ntambo obudaywe Indwangu, Yarn Dyed Brushed Fabric, Yarn Dyed Check Fabrics,